အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 29, 2009 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
လာမည့် Techmakers ဖြစ်ရပ်အထူးဖြစ်လိမ့်မည်! စကားပြောခွင့်ရလို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Techmaker ကမတူညီတဲ့ပရိသတ်ကိုပေးတယ်။ Techmaker များသည်များသောအားဖြင့် back-end နှင့် front-end ရှေးရှေးများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးသောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များကိုတက်ရောက်ရန်အသေးစားနှင့်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပေါင်းစည်းထားပါသည်။
နောက်တစ်နေ့ဖြစ်ရပ်မှာဖြစ်လိမ့်မည် Scotty ရဲ့ Brewhouse 5:5 pm မှာအင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်နေ့တွင်မြို့လယ်။ မင်းတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Scotty's ရှိ privacy ခန်းနှစ်မျိုးလုံးကိုယခုတက်နေသည့်အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငါအပေါ်စကားပြောပါလိမ့်မယ် အရောင်းပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့။ နည်းပညာကိုအသုံးမပြုနိုင်သောအရောင်း ၀ န်ထမ်းများသည်ရှိသူများကိုနောက်ကျမှထိုင်။ ကွာဟမှုကြီးထွားလာသည်။ အွန်လိုင်းရှိခြင်းမရှိသည့်ရိုးရာအပြင်ဘက်အရောင်းဌာနများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုအားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ်ထားနေကြသည်။
ပြissueနာမှာစားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယခုမယုံနိုင်စရာရှိသည် အွန်လိုင်းရရှိနိုင်တဲ့ကိရိယာများနဲ့ကွန်ရက်များ သူတို့ကိုဝယ်ယူမှုနှင့်စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ပညာပေးကူညီပေးဖို့။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ထားသောကွန်ရက်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သော့ချက်စကားလုံးများနှင့်စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသတင်းအချက်အလက်များစွာထောက်ပံ့ပေးသောဘလော့ဂ်များရှိသည် ရှေ့မှာ သူတို့သည်သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအားခေါ်ဆိုသို့မဟုတ်စကားပြောကြသည်
သင်၏ site၊ ဖုန်း၊ သင်၏အိမ်တံခါးသို့အလားအလာတစ်ခုရောက်ရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်သင်ဖြစ်ချင်သည်ထက်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအားပိုမိုသိရှိနားလည်လာသည်။
ယခင်ကသင်၏အရောင်းဝန်ထမ်းသည်အလားအလာနှင့်ရောင်း ၀ ယ်မှုကြားရှိလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါမမှန်ဘူး အခုတော့အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရရှိနိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကစီးရီးပါပဲ။ ရလဒ်အနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လူများသည်အရေးကြီးသောအဆင့်၌ရောက်ရှိနေချိန်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှပါ ၀ င်လိုပါက၊ သူတို့အားဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပျက်နေကြတယ်ဘယ်မှာအရောင်းလူတွေအွန်လိုင်းဖြစ်ရမည်.
ဒေါ်လာဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်း ရောင်းအားကြီးထွားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းတော့မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အပြင်ထွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏အရောင်းအသုံးစရိတ်များအတွက်တိုးတက်မှုရလဒ်များကိုလိုချင်ပါကအဝေးမှခေါ်ဆိုမှုများကိုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဟန်ချက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး၏ချိန်ခွင်လျှာသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားထိတွေ့မှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ရေရှည်တွင်သင့်တွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ဤနည်းစနစ်များကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်များ၊ ရည်ညွှန်းသည့်ဆိုဒ်များနှင့်ဘလော့များ၊ LinkedIn နှင့် Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များအပြင်တွစ်တာကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ရက်များမှအသွားအလာနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာများသည်အရှိန်အဟုန်လိုအပ်သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အနေဖြင့်အွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအထောက်အကူမပြုနိုင်ပေ။ သို့သော်တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်ထင်ထားသည့်အတိုင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေရန်အလားအလာရှိသည်။